सपनाले पहिलो पटक आफ्नै संस्थाबाट ३ शिशु सहित ८ श’व ब्यवस्थापन गरिन् (भिडियो हे’र्नुहोस्) – Gorkhali Dainik
सपनाले पहिलो पटक आफ्नै संस्थाबाट ३ शिशु सहित ८ श’व ब्यवस्थापन गरिन् (भिडियो हे’र्नुहोस्)
March 21, 2021 207
चर्चित अभि’यन्ता सपना रोका मगर काममा फर्केकी छिन् । उनी सनिबार पशुपति आर्य’घाटमा काम गरिरहेको देखिइन् । उनले एकैदिन आठ बे’वारिसे शव ब्यव’स्थापन गरेको बताइन् । बीबीसीको प्रभावशाली १०० जनाको सूचीमा परेकी सपना रोका मगरले आफ्नै संस्था’बाट सामूहिक दा ‘ह सं स्का र गरेकी छन् ।
बेवारिसेको श’व व्यवस्थापन गर्ने म्याग्दीकी सपनालाई गत मंसिर ८ गते बीबीसीले विश्वका १०० प्रभावशाली महिलाको सूची’मा सामेल गरेको थियो यो सफलतामा उनी अ’त्यन्त खुसी थिइन् । तर, उनलाई पढाइ छुटेकोमा उनलाई चि’न्ता थियो ।
२०७३ सालमा महेन्द्ररत्न उच्च माध्यामिक विद्यालयबाट एस’एलसी पास गरेकी सपना सदरमुकाम म्या’ग्दी गएर व्यवस्थापन विषयमा कक्षा ११ मा भर्ना भएकी थिइन्। तर, त्यसपछि उनले पढाइ बीचमै छाडे’की थिइन् ।
पढाइ छाडेर कु’ ल त मा लागेकी उनी परिवारबाट समेत टाढा भएकी थिइन् । पछि बेवा’रिसे शव व्यवस्थापनको काममा’र्फत उनले आफूलाई सामान्य जीवनमा फ’र्काए पनि पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेकी थिइनन् । पछिल्लो समय उनी कानून बिषय लिएर पढा’ई अगाडि बढाउँदैछिन् ।
अब पढाइसँगै बेवा’रिसे शव व्यवस्थापनको काममा ख’टिने उनी बताउँछिन् । यी दुईवटै विषय मेरा लागि उस्तै हुन् । बे’वारिसे श’व व्यवस्थापन जसले मलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍यायो, पढाइ पनि उत्तिकै महत्व’पूर्ण छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अब सँगै अगा’डि बढाउँछु ।’- इताजा खबरबाट
Prevसवारी दुर्घटनामा अनमी गंगा रानाको दु:खद निधन, मनमा माया भए #RIP लेखौ
Nextमनाङ दुर्घटनामा, नाबालकसहित एकै परिवारका ३ जनाको मृत्यु
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाटै लोकसेवा विज्ञापन खोल्ने तयारी
महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रले बनायो आईसीयूका संक्रमितका लागि स्वास्थ्य सामग्री…….!
ब्रेकिङ : वायु प्रदु’षण घट्यो नेपालमा, बढ्यो मंगोलिया र चीनमा !
कोहलपुरमा भएको त्यो भ’यानक बस दुर्घटना: मृत्यु भएका पाँचैको सनाखत